Abakhiqizi be-Plant Extract powder series - Abahlinzeki be-AASraw
/ Imikhiqizo / Plant Khipha
Kulesi sihloko, ikakhulukazi sethula izimpahla zemvelo ezikhipha izitshalo, njengeBromelain, i-orange ebabayo, njll.
I-Bromelain iyi-enzyme etholakala enjinini ye-phaphayinaphu nasesihlahleni se-ananas. Abantu bayisebenzisela imithi.
I-Bromelain isetshenziselwa ukunciphisa ukuvuvukala (ukuvuvukala), ikakhulukazi emakhaleni nasesimweni, ngemuva kokuhlinzwa noma ukulimala. Ibuye isetshenziselwe i-hay fever, ukuphatha isifo sofuba esihlanganisa ukuvuvukala nezilonda (ulcerative colitis), ukususa izicubu ezifile nokulimala ngemva kokushisa (ukukhathala), ukuvimbela ukuqoqwa kwamanzi epulazini (i-pulmary edema), imisipha ephumuzayo, ukuvuselela ukuhlukumeza imisipha, ukunciphisa ukunqanda, ukuthuthukisa ukukhipha imithi ye-antibiotics, ukuvimbela umdlavuza, ukunciphisa abasebenzi, nokusiza umzimba ukuba ulahle amanoni.
Ibuye isetshenziselwe ukuvimbela isisu soreness emva ukuzivocavoca okukhulu. Lokhu kusetshenziselwe ukufunda, futhi ubufakazi bukhomba ukuthi i-bromelain ayisebenzi kulokhu.
Abanye abantu basebenzisa umkhiqizo (Phlogenzym) we-arthritis (i-osteoarthritis) ehlanganisa i-bromelain ne-trypsin (iphrotheni) ne-rutin (into etholakala ku-buckwheat). I-Bromelain esetshenziswe ngale ndlela ibonakala ukunciphisa ubuhlungu nokuthuthukisa umsebenzi wegciwane kubantu abane-arthritis.
Akukho ubufakazi obanele besayense bokunquma noma ngabe i-bromelain iyasebenza yini noma yimuphi omunye umsebenzi wayo.
I-Bromelain ibonakala yenza umzimba ukhiqize izinto ezilwa nobuhlungu nokuvuvukala (ukuvuvukala).
I-Bromelain iqukethe namakhemikhali aphazamisa ukukhula kwamangqamuzana e-tumor nokunciphisa igazi kancane.
Uphayinaphu, ongowokuzalwa eNingizimu Melika futhi oyingxenye ethandekayo yemithi yesintu yaseHawaii, ungomunye wemithombo ecebe kakhulu emhlabeni we-enzyme bromelain. Iqukethe ama-endopeptidases amaningana kanye nezinhlanganisela ezifana ne-phosphatase, i-glucosidase, i-peroxidase, i-cellulase, i-escharase ne-protease inhibitors. Imvamisa i- “bromelain” edayiswa kwifomu yokukhipha noma yokwengeza ibhekisa kuma-enzyme akhishwe esihlokweni sikaphayinaphu noma ezinhlakeni, kunokuba athathwe enyameni yesithelo.
Isetshenziswe kabanzi njengendlela yokwelapha yemvelo yokwelapha konke okuvela ekukhusheni ukuya emzimbeni, i-ananasisi ayinayo nje le enzyme, kodwa futhi i-vitamin C, i-vitamin B1, i-potassium, i-manganese ne-phytonutrients. Ngenkathi i-ananasini inezinzuzo eziningi, imfihlo yangempela yamandla ayo okuphulukisa nakanjani i-bromelain.
Iyini i-bromelain esetshenziselwa ukuphatha? Ezweni lezokwelapha, lesi sakhi esithakazelisayo sesivame ukusetshenziswa njengelutho eliphikisayo lokulwa nokuvuvukala. Ucwaningo luye lwabonisa ukuthi lunezakhiwo ze-fibrinolytic, antiedematous and antithrombotic, okusho ukuthi kusiza ukuvimbela ama-clots, i-edema nokuvuvukala. Esikhathini esidlule, le-enzyme nayo isetshenziselwa njenge-tenderizer yezinyama, isizathu sokuthi kuyasiza ukunciphisa nokuphumula, izicubu ezivuthayo nezicubu ezixhunyiwe. Ngaphezu kwalokho, ucwaningo lwamuva luthole ubufakazi bokuthi le enzyme iyeka imitha yamaphaphu emathweni ayo, okusikisela ukuthi i-bromelain ingasetshenziswa ukuphatha izifo ezihlukahlukene, okungenzeka kuhlanganise nomdlavuza.
Ukubukeka kwezincwadi zesayensi, ezihlanganisa izihloko ze-1,600-plus ezihlola izinzuzo zokwelapha ze-bromelain, kubonisa ukuthi isetshenziselwe ukuphatha izinkinga eziningi zezempilo, kufaka phakathi:
Ukulimala kwezicubu ezixhunyiwe, njengezinyembezi ze-ACL
I-arthritis, ubuhlungu obuhlangene kanye ne-osteoarthritis
Izinkinga zokugaya njenge-heartburn noma isifo sohudo
Isifo sofuba esiswini
Izifo zesinus, njenge-bronchitis nesinusitis
Ukulimala okuhlinzekwayo nokuphulukiswa kancane kwezilonda zesikhumba noma ukushisa
Ukunakekelwa kabi kwezidakamizwa, ikakhulukazi ama-antibiotics, kanye nezimpawu ngenxa yokuphuza imithi
I-orange orange, i-Orange orange, i-orange omuncu, i-bigarade i-orange, noma i-marmalade orange ibhekisela kwisihlahla se-citrus (Citrus × aurantium) nesithelo sawo. Izwe langaseningizimu-mpumalanga ye-Asia, futhi isakazwe abantu ezindaweni eziningi zomhlaba. Izihlahla zasendle zitholakala eduze nemifudlana encane ezindaweni ezingasese ezihlangene kanye nasezinkuni zaseFlorida naseThe Bahamas ngemva kokusakazwa endaweni evela eSpain, lapho kwaziswa khona futhi kwahlonywa kakhulu ekuqaleni kwekhulu le-10th amaMorors. I-bitter orange iyathengiswa njengendleko yokudla ngenxa yezinto zayo ezivuselelayo, nakuba idatha yokuphepha ilahlekile futhi ihlanganiswe nemiphumela eminingi emibi ehlanganisa ukushaywa kanye nokuhlaselwa yinhliziyo.
Izinhlobo eziningi ze-orange ezibabayo zisetshenziselwa amafutha abo abalulekile, futhi zitholakala ngamafutha, asetshenziswa njenge-flavouring noma njenge-solvent. Izinhlobonhlobo ze-orange ze-Seville zisetshenziselwa ukukhiqizwa kwe-marmalade.
I-orange orange iyasebenza nasemthini wezokwelapha njengomuthi ocindezelayo nesondlo, ngenxa yesithako sayo esisebenzayo, i-synephrine. Izithako ezinzima ze-orange ziye zaxhunyaniswa nemiphumela emibi emibi kanye nokufa, futhi amaqembu abathengi akhuthaza abantu ukuthi bagweme ukusebenzisa izithelo ngemithi. Akukaphethiwe uma i-orange ebabayo ithinta izimo zezokwelapha zenhliziyo nezitho zenhliziyo, ngokwazo noma ngamafomu nezinye izinto. Ukukhishwa kwezinto ezijwayelekile zokukhishwa ngokuphathelene nezakhiwo eziluhlaza okomuncu nge-National Institute of Standards and Technology (NIST), izithelo zomhlabathi, ukukhipha kanye nesimo somzimba oqinile, kanye nalabo abahlanganiswe ndawonye into eyodwa.
I-PolypodiuM I-powder Extract